SOMALILAND oo jawaab iyo digniin adag ka bixisay warqad kasoo baxday Puntland - Caasimada Online
Home Warar SOMALILAND oo jawaab iyo digniin adag ka bixisay warqad kasoo baxday Puntland
SOMALILAND oo jawaab iyo digniin adag ka bixisay warqad kasoo baxday Puntland
Hargeysa (Caasimada Online) – Wasaaradda waxbarashada Somaliland ayaa si adag uga jawaabtay warqad dhawaan kasoo baxday maamulka Puntland, taasi oo lagu mamnuucayay in imtixaanka shahaadiga ah ee Somaliland lga mamnuucay gobolka Sanaag.
Somaliland ayaa qoraalka kasoo baxay Puntland ku sheegtay wax laga xumaado, ayadoona ku tilmaamtay mid “xagjir-nimo ah” oo aan sharciyad ku dhisneyn, islamarkaana wax saameyn ah ku yeelan karin howlaha qaadista Imtixanaadka shahaadiga ah ee ardayda Somaliland.
War-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda waxbarashada Somaliland ayaa sidoo kale waxaa lagu faray maamulka gobolka Badhan inay indho dhow iyo feejignaan u yeeshaan hadalada qalafsan ee kasoo baxay maamulka Puntland, si aan waalidiinta iyo ardayda loo gelin dareen aan jirin.
Somaliland ayaa sidoo kale ayadoo ka jawaabeysa warqadaas u digtay maamulka Puntland iyo cid kasta oo ku howlan khal-khal gelinta habsami u socodka imtixaanadka shahaadiga ah ee ay qaado.
Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Somaliland waxay u xilsaarantahay in bulshada aqoontooda iyo garaadkooda la kobciyo si horumar waara loo gaadho. 25kii sanadood ee u danbeeyey imitxaanaadka shahaadiga ah waxaa si habsami ah looga qaadayey dhamaan ardayda wax ku barata gobolada iyo degmooyinka dalka.
Ugu dambayn Wasaaradda Waxbarashada JSL waxay uga digaysaa cidkastoo isku dayda ama ku fikirta khalkhal gelinta habsami u socodka imtixaanaadka qaranka.